बमजनको आश्रम भित्रै अनुयायीको हत्या ! प्रहरीले भेट्यो बलियो प्रमाण « Niatra TV
बमजनको आश्रम भित्रै अनुयायीको हत्या ! प्रहरीले भेट्यो बलियो प्रमाण
काठमाण्डौं २५ पौष । ‘तपस्वी’का भेषमा बसेका रामबहादुर बम्जनको आश्रममा अनुयायीको हत्या भएको प्रमाण फेला परेको प्रहरीले दावी गरेको छ । आश्रमवाट आनीहरु हराएको भन्दै आफन्तले प्रहरीमा उजुरी दिएपछि प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको हो । प्रहरीले आश्रम आसपासमा नाकाबन्दी गरेर प्रमाण खोजी गरेको थियो । गत शुक्रबार र शनिबार केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी), जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोक र इलाका प्रहरी कार्यालय नवलपुरको संयुक्त टोलीले बम्जनको आश्रममा छापा मारेको थियो ।
फरेन्सिक विज्ञसहित काठमाडौंबाट पुगेको सीआइबीको टोलीले स्थानीय प्रहरीसँगको समन्वयमा सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिका–६ बाँडेगाउँस्थित बम्जनको आश्रममा अनुसन्धान गर्दा अनुयायीको हत्यासम्बन्धी केही प्रमाण फेला पारेको हो।
आश्रममै रहेका प्रत्यक्षदर्शीले नुवाकोटका अनुयायी सञ्चलाल वाइबाको बाँडेगाउँकै आश्रममा हत्यापछि नुन हालेर खाडलमा पुरेको जानकारी दिएका थिए। ती अनुयायीको जानकारीपछि सञ्चलालका छोरा महेन्द्रले जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोक र मकवानपुरमा निवेदन दिएका थिए। सञ्चलाल पछिल्लो पटक २०७१ चैत १५ परिवारको सम्पर्कमा थिएका थिए।
ती अनुयायीले दिएको जानकारीअनुसार सीआईबीसहितको टोलीले सञ्चलालको हत्या भएको भनिएको आश्रमको सम्भावित स्थान उत्खनन गरेको हो। अनुयायीका अनुसार खाडल उत्खनन क्रममा प्रहरीले आयोडिन नुनका नौ वटा खाली प्याकेट बरामद गरेको छ। तर, खाडलबाट शवको कुनै अवशेष भने प्रहरीले फेला पार्न नसकेको जनाएको छ । ‘शव निकालेर जलाइएको हुन सक्ने अनुमान गरेको छ ।
तर अनुसन्धान प्रभावित हुने भन्दै संकलित प्रमाणबारे प्रहरीले अहिले नै सबै कुरा बताएको छैन । प्रहरीले अनुसन्धान टुंगोमा पुर्याए पछि मात्र यस बारेमा बताउने प्रतिकृया दिएको छ । प्रहरीले आश्रमका १४ जनासँग सोधपुछ गरेको थियो। तीमध्ये सात जना सञ्चलालको हत्याका बेला आश्रमभित्रै रहेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । लाइटनेपालमा खबर छ ।